आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सञ्चारमाध्यम अवज्ञाकारीको सूचीमा, को-को परे ? – Himalitimes
आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सञ्चारमाध्यम अवज्ञाकारीको सूचीमा, को-को परे ?
२०७५ माघ २८ २१:२१ मा प्रकाशित
पीडित पक्षले मानमर्दन हुनेगरी कपोकल्पित, झुठो, समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरेको, समाचारमार्फत चरित्र हत्या गरेको वा विभिन्न तरिकाले पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको उजुरी दिएका आधारमा त्यसबारे पटकपटक पत्र पठाउँदासमेत बेवास्ता गरेको भन्दै ती सञ्चारमाध्यमलाई अवज्ञाकारीको सूचीमा राखिएको सहप्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी दीपक खनालले जानकारी दिए । काउन्सिलले गरेको स्वअनुगमनका क्रममा समेत आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएको उनले बताए ।
पाँच डीएसपी काज सरुवा : कस्को कहा ?
गणतन्त्र सिध्यायर राजतन्त्र ल्याउने चनखेल् सुरु भैसक्यो -चित्रबहादुर केसी ।